Warar - Rajada horumarka ee boorsada waraaqda ah
Bacda waraaqda Kraft waxay ku saleysan tahay xaashi xaashi, midabku wuxuu u qaybsan yahay warqad cad oo cadaan ah iyo warqad jaalle ah oo jaalle ah, wuxuu isticmaali karaa wax PP ah warqada oo leh lakab filim ah, saameyn aan biyuhu lahayn, awooda bacda waxaa lagu sameyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha mid ilaa lix lakab, daabacaadda iyo isku-dhafka boorsada. Hababka wax lagu xidho ee furan iyo hoose ayaa loo qaybiyaa shaabad kuleylka, shaabad waraaq iyo gunta hoose.
Bacda waraaqda ee Kraft waa bac ka samaysan waxyaabo isku dhafan. Sababtoo ah astaamaha aan sunta ahayn, dhadhanka lahayn iyo ilaalinta deegaanka ee sheyga wax soo saar ee bacda warqadda kraft, "bacda warqadda waraaqda ah" waxay noqotay badeecad caalami ah oo laga aqoonsan yahay ilaalinta deegaanka iyada oo lagu qanco isticmaalka cagaaran ee dadka. Boorsada “kraft paper bag” waxaa laga arki karaa meel kasta oo ka mid ah suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto iyo dukaamada waaweyn ee dalka iyo dibaddaba. Isagu wuxuu u eg yahay dagaalyahan yar, oo nagu weheliya nolol maalmeedkeena oo naga caawiya inaan la wadaagno culeyska nolosha.
Caqliga caadiga ah ee ay dadku iibsan karaan oo kaliya alaabada inta ay la qaadan karaan ayaa la burburiyay soo bixitaanka boorsooyinka isku dhafka ah ee waraaqda ah, oo ka joojiyay dukaamo badan inay ka walwalaan waxa aysan qaadi karin maalmaha ganacsiga. Haddii dhalashada waraaqda waraaqda ah ee waraaqda ah ay kobcisay horumarka dhammaan warshadaha tafaariiqda, laga yaabee xoogaa buun buunin, laakiin ugu yaraan waxay shaaca ka qaaday dhacdo ku dhacday meheradda, taas oo ah, waayo-aragnimada wax iibsiga ee macaamiisha waxay noqotay heerka ugu sarreeya ee nasashada, habboon, raaxo leh ka hor, si fudud uma saadaalin karno inta shay ee macaamiishu iibsan doonaan. Si sax ah ayey taasi u tahay, waxay sababtay in dadka dambe ay fiiro gaar ah u yeeshaan khibrada wax soo iibsiga macaamiisha, isla markaana ay kor u qaadaan horumarinta gawaarida wax iibsiga iyo dambiisha dukaanka dambe.
Nus qarniga soo socda, horumarinta boorsooyinka wax lagu iibsado ee waraaqaha ah ayaa nasiib wacan ku jira. Kordhinta tayada maaddada ayaa kor u qaadday awoodeeda qaadista waxayna ka dhigtay muuqaalkeedu mid aad iyo aad u qurux badan. Soo-saareyaashu waxay daabaceen dhammaan noocyada sumadaha ganacsiga iyo qaababka wanaagsan ee bacaha waraaqaha waxayna galeen dukaamada iyo dukaamada ku yaal waddada ganacsiga. Ilaa bartamihii qarnigii 20aad, soo bixitaanka bacaha wax lagu iibsado ayaa noqday kacaan weyn oo taariikhda baakadaha wax lagu iibsado ah. Bacda wax lagu iibsado ee caaga ah qiimaheeda oo hooseeya, tayada adag, khafiifka ah iyo faa iidooyinka iftiinka leh marmar aan xaddidneyn warqadda warqadda dusha laga soo tuuray Tan iyo markaas, bacaha balaastigga ah waxay noqdeen xulashada koowaad ee nolosha, suunka lo'da si tartiib tartiib ah "safka labaad". Ugu dambeyntiina, boorsooyinka waraaqaha kraft-ka ah waxaa loo isticmaali karaa oo keliya tiro aad u yar oo buugaag ah, dhar, iyo wax soo saarka fiidiyowga ah oo leh magaca "deegaan", "dabiici ah" iyo "nostalgic".